FAQ (Frequently Asked Questions) :: - राएलियन आन्दोलन
एलोहिमलाई कसले बनाएका हुन्?
यदी हामीले भगवानमा विश्वास गर्ने हो भने, हामी सोध्न सक्छौं की "भगवानलाई कसले बनायो?"। यदी हामीले ईभोलुशन र 'बिग् ब्याङ" मा विश्वास गर्ने हो भने, हामी सोध्न सक्छौं की "यो बिग-ब्याङ सृजना गर्ने वस्तु र शक्ति कहाँ बाट आयो?"।
एलोहिमका कथा पनि यहिनै हो -- उनीहरूलाई आकाशबाट आएका मानिसहरूले बनाएका थिए, जसलाई अरू आकाशबाट आएका मानिसहरूले बनाएका थिए। यो जीवनको एक अनन्त चक्र हो। एक दिन पृथ्वीका वैज्ञानिकहरूले पनि अर्को ग्रहमा गएर सृष्टी गर्नेछन्।
तिनीहरूलाई किन एक राजदूतावासको जरूरी छ?
एलोहिमहरू आक्रमणकारी छैनन्। उनीहरूले आउने चाहना देखाएपनि हामीले नचाहेमा हाम्रो सो इक्षालाई मान्छन्। उनीहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने वा नगर्ने हाम्रै हातमा छ, र राजदूतावासको निर्माण नै हाम्रो उनीहरूलाई निमन्त्रणा हो। कम्तीमा पनि हामी यति गर्न सक्छौं।
एक विपक्षी राजदूतावास, स्वतन्त्र हावा र औपचारिक स्वागत विना एक अघोसित र अनिक्षित भेटले विश्वभरि ठुलो विनाशिलो राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक नतिजा ल्याउँथ्यो। अरू कुनै संस्थालाई शुरूमा खबर गरी उनीहरूले न त कुनै सरकार, धर्म अथवा रायलिएन सिद्धान्त बाहेक अरू कुनै सिद्धान्तलाई अकिंत गर्न चाँहदैनन्। त्यसैले हामीले राजदूतावास निर्माण गरेपछी मात्र उनीहरू आउँछन् -- उनीहरूको हामीप्रति यस्तो माया र सम्मान छ।
उनीहरूकै निर्देशनमा रायलले रायलियन आन्दोलनको स्थापना गरे। यो एक नन्-प्रफिट अन्तर्राष्ट्रिय संघ हो जसले सहयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई सँगै ल्याउँछ। यो एक खुल्ला संघ हो जसले मानिसलाई पत्याउन लगाउँदैन। जानकारि दिनको लागि र भाग लिन र छोड्न चाहनेहरूलाई सो गर्न दिने गरि यो संघ बनाइएको हो। रायल लगायत रायलिएन आन्दोलनका कुनै पनि सदस्यलाई केही तलब छैन।
तिनीहरूले किन आफूहरूलाई सबैको अगाडी देखाउँदैनन्, जसले गर्दा हामीसँग राएलको बयानको प्रमाण हुन्थ्यो?
यो घटना एकछिनलाई कल्पना गर्नुहोस्... सबैठाउँमा हुने, तर कहिले नदेखिएको यो शक्ती जसले हामीलाई सृजना गरेको...सबैले देख्नेगरी एक्कासि पृथ्वी अथवा आकाशमा आउँछ...एक अर्कै ग्रहबाट आएको "अन्तरिक्ष जहाज" ...कल्पना गर्नुहोस्।
जब मानव आकारको जीवहरू "अन्तरिक्ष जहाज" बाट ओर्लिन्छन्, मान्छेहरूले कस्तो विचार राख्छन् होला? हुनसल्छ की तिनीहरूलाई मानिसहरूले अरूको ईलाकामा नसोधिकन आउने जीवहरू भन्ठानेर सैनिक आक्रमण गर्नसक्छन्। यस्तो शान्तिसाली भेट संभव हुनको लागि दुवै पार्टी बुझ्झकी हुनुपर्छ।
राएलले भन्छन् की क्राइस्टको पालामाझैं एलोहिमले उनीहरू हाम्रो सृष्टीकर्ता हुन् भनेर बुझाउनको लागि कुनै "जादु" देखाउने छैनन्। यस्ता उच्च घटनाहरूले एलोहिमका शक्ति देखाएपनि क्राइष्टका सिद्धान्तका विरोधीहरूले उसलाई क्रुसिफाइ गरे। यो "जादु" हरूलाई प्रमाण मानिएनन्।
यो बुझ्नु जरूरी छ की एलोहिमले हामीले उनीहरूलाई पूजा गरोस् भनी चाहँदैनन्। बरू उनीहरू प्रति र एक आपसमा माया गरोस् भनी चाहन्छन्। उनीहरूले हामीमा सत्यको पूर्ण बुझाउ होस् भन्ने इच्छा राख्छन्। उनीहरूबाट सिकी हामीले एक दिन संसारको बृहत ज्ञानको निकायमा केही दिएर सबैको चेतना जगाओस् भन्ने आशा राख्छन्।
इतिहासमा यो समय ज्यादै महत्वपूर्ण छ किनभने हामीले आफ्नो जीवनको बारे बुझ्नको लागि चाहिने टेक्नलजिकल ज्ञान बटुलिसक्यौं। सजिलो तरिकामा लेखिएता पनि, यो सन्देशहरूले हाम्रो उत्पतीको तथ्य बुझ्न, हाम्रो ग्रहको वर्तमानको विकट अवस्था बुझ्न, र मानवताको शक्ति प्राप्त गर्नको लागि के 'पेरेडाइम सिफ्ट्' ल्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरूमा मूल जानकारी दिन्छ।
जहिले र जब त्यो बेला आउँछ, एलोहिमले हामीलाई भेट्न आउनेछन्। यो बेला तब आउँछ जब चेतना भएका मानिसहरूले यो ग्रह भरिन्छ र उनीहरूलाई पाहुना झैं स्वागत गर्न तयार हुन्छ।
राएलियनहरूले कसरी एक जना मान्छेले भनेको कुरा पत्याउन सक्छ?
राएलका कितावहरूमा लेखिएका सबैकुरा प्राचीन धार्मीक ग्रन्थहरू, लेखहरू, परम्परा र आधुनिक विज्ञानले पक्का गर्छन्। मानव र अर्को ग्रहको जातिहरूसँग भेट भएको चिन्हहरू सबै महादेशहरूको इतिहासभरि पाईन्छ। तपाईंले आजको वैज्ञानिक विकासहरू हेर्नुभयो भने, यो सबै राएलले ३२ वर्ष अगाडि भनिसकेका थिए।
राएलियन सिद्धान्त बुझ्ने बारे हो, पत्याउने होइन। त्यसैले राएल आफैंले तपाईंलाई उसमा त्यतिकै नपत्याई आफ्नै खोजी गरी हेर्नु भन्छन्।
के राएलले राएलियन आन्दोलनबाट केही तलब पाउँछ?
पाउँदैन। राएलियन आन्दोलन एक नन्-प्रफिट संस्था हो जसले राएल लगायत अरू कसैलाई पनि केही तलब दिंदैन। यसका सबै सदस्यहरू आफूले दिन सक्ने समय दिएर स्वयमसेवा गर्दछन्।
आन्दोलनलाई दिएको पैंसा राएलको तलबको लागि नचलाइयोस् भनेर पक्का गर्नको लागि राएलियन फाउन्डेसन् भन्ने एक छुट्टै संस्था छ जसले राएललाई आर्थिक सहयोग दिन्छ। यदी चाहेमा राएलियनहरूले यो फाउन्डेसनलाई चन्दा दिन सक्छन्, तर यो गर्नैपर्छ भन्ने छैन।
यो संस्थाले चन्दा लिन्छ भने त्यो पैंसा कहाँ जान्छ?
हाम्रो समाज अझैपनि पैंसाको व्यवस्थामा चलेको छ, र राएलियन आन्दोलन पनि आफ्नो भौगोलिक कार्यक्रमहरू गर्नको निम्ति चन्दामा आश्रित छ।
राएलियन आन्दोलनलाई दिइएको चन्दा हाम्रा दुईवटा लक्ष्यको लागि चलाइन्छ:
१) मानवतालाई एलोहिमले राएललाई दिएका सन्देशहरू थाहा दिन (सूचना पत्र, पोष्टर, प्रवचन, प्रचार, वेबसाइट ईत्यादी द्वारा)
२) एलोहिमलाई औपचारिक स्वागत गर्नको निम्ति एक राजदूतावास बनाउन
राएलियन आन्दोलनको कुनै पनि सदस्यले केही तलब पाउँदैन। हामी सबैले पूरै स्वयम् सेवा गर्छौं। यो नियम राएललाई पनि लागू हुन्छ जसले राएलियन आन्दोलनबाट एक पैंसा पनि पाउँदैन। कसैलाई राएललाई व्यक्तिगत रूपमा चन्दा दिन चाहेमा उसले राएलियन फाउन्डेसन (जुन एक छुट्टै निकाय हो) द्वारा गर्न सक्नेछ। यसो गरेमा राएलले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन आफ्नो लक्ष्यको लागि दिन सक्नेछ।
भगवान मान्ने मान्छेहरूबाट एक राएलियन कसरी फरक हुन्छ?
सर्वप्रथम, भगवान (गड) को माने जे हो, त्यसलाई हेरौँ। रेन्डम हाउस वेब्स्टर्स कलेज शब्दकोषले 'गड' (भगवान) भन्ने शब्दलाई "जगतको सृष्टीकर्ता र शासक; परम अस्तित्व" भनेर बयान गरेको छ। हामी राएलियनहरू नत कुनै "परम अस्तित्व" वा कुनै विश्व र अन्तरिक्ष सृष्टि गरी त्यसलाई शासन गर्ने अस्तित्वमा विश्वास गर्छौं। त्यसैले हामी नास्तिक हौं, जुन खण्डमा यसले हामीलाई अनन्त अन्तरिक्षको प्रश्न ल्याउँछ। अनन्तताको कुनै शुरू वा अन्त्य नहुनाले कुनै पनि कुराको अगाडी एक भगवान अथवा परम अस्तित्व थियो भन्नु असम्भव छ किनभने सुन्यबाट केही पनि कुरा बनाउन सकिंदैन। तर हामीले बुझेका छौं की एलोहिम भन्ने हामी जस्तै मान्छेहरू छन् जो प्राविधीक विज्ञानमा हामीभन्दा २५,००० वर्ष भन्दा बढी अघि छन्, र हजारौं वर्ष अघि यो ग्रहमा आएर हामीलाई थाहा भएका सबै जिन्दगी बनाउने उनीहरू नै हुन्। एलोहिमले सन् १९७३ मा राएललाई बताए की उनीहरूलाई एक जातका मानिसहरूले बनाएका थिए जसलाई पनि अर्को एक जातका मानिसहरूले बनाएका थिए, र यो चक्र कहिल्यै सकिंदैन किनभने हामी कहिल्यै नसकिने प्रक्रियामा छौँ। ब्रमाण्डको ठाउँ र समयमा कुनै सुरूवात छैन। उनीहरू हाम्रा सृष्टीकर्ता भएका हुनाले हामी उनीहरूमाथि ठूलो मान राख्छौं, तर उनीहरूलाई कुनै महान् वस्तुको रूपमा पूजा चाहीं गर्दैनौं। उनीहरूलाई हामी माया गर्छौं र हामी उनीहरूसँग सन् २०३५ को केही अगाडी को भेट लाई तयार गरिरहेका छौं। अब हामीले बुझ्न सकेका छौं की विज्ञानद्वारा उनीहरूले डि एन ए बनाए र यो ग्रहको अचल् (इनर्ट) पदार्थबाट सबै जिन्दगीको सृजना गरे।
यो कुरा हामीले पनि हाम्रो लाबोराटोरिमा भर्खरै शूरू गरेका छौं। हामीले जिन्दगी बनाउन सफल भई त्यो जिन्दगीलाई अरू ठाउँमा रोप्यौं भने के हामी पनि एक प्राचीन ग्रहको लागि भगवान हुन्छौं?
के राएलियनहरूले राएलियनिसम् लाई एक धर्म जस्तै मान्छन्?
शब्दको खास अर्थ अनुसार, हो हामीले यसलाई धर्म जस्तै मान्छौं। 'धर्म' भन्ने शब्दलाई युगौं सम्म दुवै राम्ररी र नराम्ररी चलाइएको कुरा स्पष्ट छ। त्यसर्थ मानिसहरू 'धर्म' बाट टाढै रहन चाहन्छन्। 'धर्म' को ठीक माने मान्छेहरूले नबुझेकाले यसलाई कुनै देवताको विश्वास भनेर हेर्ने गरेका छन्। 'रिलिजन' (धर्म) भन्ने शब्द लाटीन शब्द 'रिलिजार' बाट आउँछ जसको माने 'संबन्ध बनाउनु" हो - यो संबन्ध मान्छेहरू बीच, वा मानवताको सृष्टीकर्ताहरू र उनीहरूको सृष्टीहरू बीच, वा मानिस र ताराहरू बीच, वा पृथ्वी र आकाश बीच, इत्यादी...जे पनि हुनसक्छ, किनभने यहाँ सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा नै यो 'संबन्ध बनाउनु' हो।
त्यसमाथि, बुध्दधर्म जस्तै राएलियन धर्म पनि एक नास्तिक धर्म हो, किनभने भगवान नहुनाले यसले कुनै 'भगवान' मा विश्वास गर्दैन।
एकले मौलिक हिब्रू बाईबल पढेमा थाहा पाउन सक्छ की त्यहाँ 'भगवान' होइन तर 'एलोहिम' लेखिएको छ, जुन शब्द बहु‍वचन हो र जसको माने 'जो आकाशबाट आएका' हो। यदी भनेपछि यो बुझ्नु जरूरी छ की राएलियनहरूले त्यहाँ सृष्टीकर्ताहरू छन् जसले धेरै समय अगाडि शारीरिक रूपमा (किनभने तिनीहरू पनि हामी मान्छे जस्तै हुन्) पृथ्वीमा आएर सबै जिन्दगीको प्रकार ईन्जीनियर गरेका हुन् भन्ने विचारलाई मान्छन् -- जुन कुरा एक अप्राकृतिक र शक्तिसाली 'भगवान' जसले जादुले सबै कुरा सृष्टी गरेको (ब्रमाण्ड लगायत) विश्वास भन्दा नीकै फरक छ। हामी बुद्धि लगाएर ईमानदारता साथ भन्न सक्छौं की यो वैज्ञानिक यूगमा यी दुई विचार मध्ये कुन चाहीं सबैभन्दा स्वाभाविक छ। अन्तिममा यो बुझ्नु जरूरी छ की राएलियनहरूले 'भगवान' मा विश्वास गर्दैनन्, तर हामी यशू, मोहम्मद, मोसा, बुद्ध, इत्यादि जस्ता पूराना ठूला प्रदर्शक (प्रफेट) हरूलाई मान्छौं। यिनीहरू सबैलाई हाम्रा सृष्टीकर्ता एलोहिमले मानवतालाई ज्ञानको बाटोमा लानको लागि हाम्रो इतिहासभरि अलग अलग समयमा पठाएका हुन्। जब हामी उनीहरूलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने माया र सम्मान साथ स्वातग गर्न तयार हुन्छौं, तब उनीहरू हामीले बनाउने राजदूतावासमा फर्किनेछन्।
यो सिद्धान्तले तपाईंको जिन्दगीलाई कसरी फेरेको वा फाइदा गरेको छ?
यो प्रश्न यति जरूरी छ की म तपाईंसँग आफ्नो कहानी सुनाउन एकदम खुशी छुँ। मैले २१ वर्ष अगाडि राएलको "बुद्धिजीवी सृष्टी" भन्ने किताव पढेकी थिएँ। त्यसपछिको यात्रालाई म एक शब्दमा व्यक्त गर्न सक्छु: "खुशीयाली"। एक आनन्दपूर्ण र सच्चा खुशीयाली बाँच्न सक्छु भनेर मैले कहिल्यै सोचेकी थिइन। मलाई कहिल्यै राम्रो नठान्ने "सबै ठाउँमा रहने भगवान" हुँदैन, तर म जस्तै एक किसिमको मानवजाति ले सबै जिन्दगी बनाएको, भन्ने कुरा बुझेपछि मेरो जिन्दगी बदलियो। हरेक दिन एक आविष्कारको दिन भएको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यक्क्ति पत्ता लगाउँदै छु - आफू। मेरो पूरै जिन्दगी चर्च, परिवार, विद्यालय र समाजको नियमहरू पालना गर्ने बारे थियो। यी सबै नियमहरूको पालन गर्न सक्षम् थिएँ, तर म भित्र सन्तुष्ट थिईन। यो लडाईं म भित्र चलिरह्यो र यो संघर्षले मेरो जिन्दगीको अज्ञानतालाई नास गरिरहेको थियो। अब म सत्यले भन्न सक्छु की म डरमा बाँचेकी छैन। मेरो जिन्दगी मेरो आफ्नै हो र मेरो सबै कार्य र निर्णयको जिम्मेवारी म नै हुँ। मैले दोष लगाउनको लागि कुनै भगवान अथवा शैतान छैन। मैले आफैंलाई मात्र दोष दिन मिल्छ। मैले अब बुझेकी छुँ की मेरो आज्ञा विना कसैले मेरो खुशीयाली लिन सक्तैन। विश्वभरि राएलले सिकाउने धेरै सेमिनारहरूमा गएपछि मैले सिकेंकी जहाजको नाइके म नै हुँ र नाइके मात्र नभई जहाज र तलको पानी पनि म नै हुँ। म हरेक दिन आफ्नो जिन्दगी बनाउँछु। र यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भन्दा माया दिएर नै आफ्नो र अरूको जिन्दगी राम्रो बनाउँन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकेकी छुँ। यो सिद्धान्तले मलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण धन दिएको छ, र मेरो जिन्दगी नै यो धन हो। जिन्दगी हामी सबैको लागी एक यात्रा हो। तपाईं आफ्नो जिन्दगी कसरी अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ? (Dana)
तपाईंहरू भेटघाट गर्नुहुन्छ? के म आउनसक्छुँ?
हाम्रो अनऔपचारिक भेटहरूमा आउन सबैलाई स्वागत छ। आफू बसेको ठाउँमा हुने भेटहरू पत्ता लगाउन कृपया माथिको-दाहिने ड्रप डाउन मेनु बाट एक राष्ट्रिय साइट छान्नुहोस्।
तपाईंहरूले सामूहिक यौनको आयोजना गर्नुहुन्छ भन्ने मैले पत्रिकामा पढेको थिएँ। यो कुरा साँचो हो?
होइन। राएलियन आन्दोलनले आफ्नो भेटघाटमा कुनै पनि किसिमको सामूहिक यौनको आयोजना गर्दैन। आफ्नो कथा बेच्नको लागि मिडियाले जे पनि भन्ने वा लेख्ने गर्दछन्। धार्मिक अल्पमत (माइनोरिटि) हरू धेरै जसो यस्ता झूठा हल्लाको जालमा फस्छन्।
क्लोन गरिएको बच्चा, ईभ, कहाँ छ?
राएलियन आन्दोलन क्लोनएडबाट भिन्दै संघ हो। क्लोनेड कुनै कम्पनि होईन। यो एक प्रोजेक्ट हो। यसलाई एक राएलियन सदस्य डा. ब्रिजेट बोइसिलिएले सञ्चालन गरेकी छिन्। क्लोनिङ् प्रविधीको समर्थन बाहेक न त राएल न त राएलियन आन्दोलनले यसलाई पैंसा दिन्छ वा यस प्रोजेक्टसँग केही सम्बन्ध राखेको छ। थप जानकारीको लागि clonaid.com मा जानुहोस्।
के राएलियन आन्दोलन एक कल्ट हो?
सर्वप्रथम हामीले "कल्ट" शब्दको माने बताउनु पर्छ।
'कल्ट' शब्दले कुनै राम्रो वा नराम्रो विचार लिंदैन।
वेब्स्टर शब्दकोषले कल्टलाई एक "धार्मिक विश्वास र विधीहरूको व्यवस्था, तथा यसका सदस्यहरू" भनेर बयान गर्छ। यो माने अनुसार कुनै पनि चर्चलाई कल्ट भन्न सकिन्छ। तैपनि वेब्स्टर शब्दकोषमा यो शब्दको अर्को माने छ जुन धर्म र समाज शास्त्रीहरूले चलाउँछने माने सँग नजिक छ: "एक धर्म जसलाई धेरैले नमानेको वा त्यस्तो कट्टर नभएको मानिन्छ, र यसको सदस्यहरूलाई पनि।"
कल्टको अर्को माने हो: "एक व्यक्ति, विचार वा वस्तुप्रति ठूलो भक्ति।"
यो माने अनुसार, राएलियन आन्दोलनलाई कल्ट मान्नु ठीकै हो।
"कल्ट" शब्दबाट नै "कल्चर" (संस्कृति) आएको हो।
क्याथोलिक चर्च अर्को एक सफल कल्ट हो।
पेडोफिलियासम्बन्धि रायलियन द्रिष्टिकोण के हो?
हामीले यौन स्वतन्त्रतालाई मानेपनि, यदि तपाईं पेडोफाइल हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई रायलियन आन्दोलनमा स्वागत छैन। यसलाई हामीले मानसिक रोग मात्र नमानी, क्याथोलिक चर्चको राजनीति बिरुद्ध जान खोजेका हौं। क्याथोलिक चर्चले आफ्ना पेडोफाइल पुरोहितहरुलाई लुकाएर राख्नको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने गरेका छन्। यसरी उनीहरुले झनै धेरैजनालाई सिकार बनाउन पाएका छन्। यस विषयमा रायलियन आन्दोलनको कडा नियम छ: कुनै पनि सदस्य पेडोफाइल भएको अथवा कानूनले दिएको उमेर मुनिको मान्छेसँग यौन सम्पर्क गरेको शंका गरिएमा त्यस व्यक्तिलाई निकाला मात्र नगरी प्रहरीलाई पनि रिपोर्ट गरिनेछ्।
हाम्रो सिद्धान्तले यौन स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिएकोहुनाले पेडोफिलियालाई पनि मान्यता दिन्छ भनेर फ्रान्सेली पत्रिकाहरुले गल्ती गरी छापेकाछन्। यही कारणले कोही व्यक्तिहर हाम्रो सिद्धान्तप्रति आकर्सित भएकाछन्। तर तथ्यमा यो उल्टो छ। जब कुनै व्यक्तिको यौन जीवन भरिपूर्ण हुन्छ, त्यति बेला उसले बच्चाहमाथि आफ्नो यौनता जबरजस्ति राख्न खोज्दैन। क्याथोलिक पुरोहितहरुले भने आफ्नो यौनता नभएको कारणले जबरजस्ति गरिरहेका छन्। कुनै लेखहरुले रायलिएन परिहरुका बारे पनि लेखिएका छन्। राएलिएन परिहरू एउटा समूह हो जसले आफ्नो स्त्रीताको विकास गर्न र आफूले चाहेमा आफ्नो यौनता आफ्ना स्रष्टीकर्ताहरू र प्रफेटहरूलाई दिने प्रतिग्या गरेकाछन्, जुन अवस्थामा उनिहरूले आफ्नो घाँटीमा गुलाबी प्वाँख लगाउँदछन्। यसले उनिहरू कोहिसँग यौन सम्पर्क राख्न नचाहेको जनाउँछ। यो सङ्गठनमा कुनै परिहरू यौन सम्पर्क राख्न ऐनले दिएको उमेरमुनि भएमा घाँटीमा कालो प्वाँख लगाउनुपर्दछन्। यसले उमेर पुगेका रायलिएनहरूलाई यी परिहरूसँग यौनको विचार नराखी कुरा गर्नुपर्छ भन्ने संकेत दिन्छ। कतिपय साना उमेरको परिहरू कोहिसँगपनि यौन सम्पर्क नराख्ने निर्णय गरेका हुन्छन्। यो अवस्थामा यी परिहरू अरू साना उमेरका व्यक्तिहरूसँग पनि यौन सम्पर्क राख्दैनन्, जुन कुरा धेरै जवान केटीहरूले अनुभव गर्छन्। यी परिहरूले पनि गुलाबी प्वाँख लगाउने गर्छन्। केही पत्र-पत्रिकाहरूले कोही साना उमेरका परिहरूका आफ्ना सृष्टीकर्ताहरू बाहेक अरू कोहीसँग यौन सम्पर्क नराख्ने सुन्दर निर्णयलाई पेडोफिलियाको संकेतको भनी बुझेकाछन्, जुन विचार गलत हो।
पेडोफिलिया एक दिमागको रोग हो भन्ने कुरा रायलिएन सिद्धान्तमा प्रस्ट छ र यसलाई संगठनभित्र कहिले पनि सहिने छैन। यदि कोहिपनि सदस्यमा, जुनैपनि दर्जाको होस्, यो स्वभाव फेला परेमा उसलाई निकाला गरी कानूनमा खबर गरिने छ।